Pastora Angoley maromaro nisintaka tamin’ny Eglizin’ny Fanjakan’Andriamanitra Erantany · Global Voices teny Malagasy
Tamin'ny Novambra 2019 no niantomboka ny toraka pilotra (antsamotady)
Voadika ny 20 Jolay 2020 14:55 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, English, Português
Mikasa ny hisintaka tsy ho eo ambanin'ny fitantanana breziliàna ny rantsana Eglizin'ny Fanjakan'Andriamanitra Erantany (Église universelle du royaume de Dieu) ao Angôlà. Mivaky toy izao ny soratra eo ambany amin'ny fàfana : « Misy pasitora breziliàna sy lehilahy maro mirongo fiadiana mitsofoka ny katedraly Morro Bento. » Pikantsary avy amin'ny lahatsary YouTube an'ny fantsona TPA, notontosain'i Dércio Tsandzana ny 27 Jona 2020
[Raha tsy itondràna fanamarihana manokana, ny rohy rehetra ato anaty lahatsoratra dia mitondra mankany aminà lahatsoratra amin'ny fiteny portiogey]
Efa tany amin'ny Novambra 2019 tany ho any ny raharaha, fony nisy andiana pasitora angoley nijoro nanohitra ireo olàna ara-pitantanana mahakasika ny rantsana angoley amin'ny Eglizin'ny Fanjakan'Andriamanitra Erantany [fr] (fanafohezana amin'ny teny frantsay EURD), iray amin'ireo lehibe indrindra amin'ny vondrom-pinoana pantekôtista amin'ny endriny vaovao eto amin'izao tontolo izao.
Nanao sonia taratasy iray misokatra ireo pasitora angoley hiampangàny ireo breziliàna mpiara miasa amin-dry zareo ho manao kolikoly sy manavakavaka, ary niampangany ny fomba fanao manery ny tsy maintsy hamatorana ny fantson-dranonaina.
Tamin'ny Jona 2020, nisy vondrona pasitora angoley tonga dia nanapaka tsotra izao ny fiarahana amin'ny EURD breziliàna, ary nanangana ny Eglizy Erantany Angoley. Manamafy io vondrona io fa mahafehy ny 42% amin'ireo tempoly ao amin'ny firenena.
Taterin'ny BBC Brésil fa fampitambaovao ofisialy iray no nasetrin'ny rantsana Eglizin'ny Fanjakan'Andriamanitra Erantany ao Angôlà izany :
Tempoly vitsivitsy ao Angôlà no nobaboinà andianà pasitora voaongana tao anatin'ny rafitra noho ny fomba fanaony mibirioka sy ny fitondrantenany tsy mendrika ny ara-maoraly ary, amin'ny tranga sasantsasany, noho izy ireo voarohirohy taminà heloka bevava sy mifanohitra amin'ny fotopisaina kristiàna tokony ho hajain'ny mpanompo mpitarika fivavahana.
Nantsoina ny polisy angôley hanampy tosika hiantohana ny filaminan'ireo eglizy tany amin'ny tanàna maro ary dia nanokafan'ny manapahefana ara-panjakana fanadihadiana trangana heloka bevava ankehitriny ity raharaha ity.
Ny 23 Jona, nilaza tamin'ny gazety mpiseho isanandro Jornal de Angola ny pasitora, Agostinho Martins da Silva, mpitondratenin'ny Kaomisiôna mpanorina ny “Eglizin'ny Fanjakan'Andriamanitra Erantany nohavaozina” ao Angôlà, fa :
Tohizan'ireo Angôley ny fijoroany vavolombelona amin'ireo fihetsika fanavakavahana, famosirana ny lahy, fanalàna zaza an-tery atao amin'ireo vadina pasitora angoley, ary ireo fanamparam-pahefana ataon'ny Fikambanamben'ireo pasitora.
Nisy fivoriana niarahanay tamin'ny fitantànana breziliàna, izay nanome toky ny hitondra fanavaozana amin'ny resaka fanavakavahana, fandosirana hetra, ary hatramin'ny fanendrena ireo pasitora angôley sy ny vadin'izy ireny hitazona toerana ambony ao anatin'ny antanan-tohatry ny eglizy, fa tsy nahitàna vokatra.
Toy ny vahiny eto amin'ny taniny ny Angôley, fa ireo vahiny no maka ny toeran-dry zareo.
Misy ireo pasitora angôley efa nanao asa fanompoana nandritra ny 18 taona mahery ary sakànana tsy hanana zo hanambady, na amin'ny faha-40 taonany aza, satria nandà tsy nety hovosirina izy ireny.
Amafisin'ny vondron'ireo pasitera nisintaka fa ny Eglizin'ny Fanjakan'Andriamanitra Erantany ao Angôlà dia ho eo ambany fitarihan'ny pasitora Valente Bezerra Luiz, filoha lefitra fahiny tao anatin'ny EURD.
Ny 26 Jona, nambaran-dry zareo fa mikatona daholo ireo eglizy rehetra manerana ny firenena, noho ny tsy fisian'ny fahafahana miantoka ny fandriampahaleman'ireo pasitora sy ny mpino.
Tao anaty lahatsary iray nivoaka tamin'ny Twitter ny 28 Jona, lazain'ny pasitora iray fa ireo Breziliàna dia mandrisika ireo fomba fanao mifanohitra amin'ny zo maha-olona sy ny lalampanorenana ao Angôlà:
Takian'ireo tanora ao amin'ny Eglizy Erantany ao Angôlà ny hisian'ny fanavaozana ny eglizy.
Nohazaina hiala ny tempoly tao Angôlà ireo pasitoran'ny Eglizy Erantany.
Voatery nanao tongotra an-katoka ry zareo, ary marobe tamin'izy ireo no eny an-dalambe izao.
Maniry ny hody any Brezila ry zareo.
Mazava loatra, ry mpametsifetsy.
Ny 6 Jolay, Agência Pública nanamarika fa i Edir Macedo, mpitarika faratampony ao amin'ny EURD, dia manondro fa ireo breziliàna pasitora roa fahiny niasa tao Angôlà no fototr'io « fakàna fahefàna » io :
Ao anaty lahatsary iray nalefa mivantana tety anaty tambajotra sôsialy ny Sabotsy 27 Jona, sy nambara ho toy ny « fisaintsainana niarahana tamin'ireo pasitora », dia notanan'ilay mpitarika faratampon'ny Eglizin'ny Fanjakan'Andriamanitra Erantany (EURD), Edir Macedo, ho tomponandraikitra tamin'izao « fakàna fahefana » tao Angola izao ireo Breziliàna roa pasitera fahiny, João Leite sy Alfredo Paulo. Tao anatin'ny 15 andro, nitroatra ireo afrikàna mpitarika fivavahana ary naka ny fifehezana ireo tempoly 220 tamin'ireo 300 anànan'ny EURD manerana ny firenena.
Fanoritsoritana ny fototry ny olana
Niforona tany Brezila tany amin'ny faramparan'ny taona 1970 tany ny EURD, tonga tao Angôlà tany amin'ny fiandohan'ny taona 1990 ary amin'izao fotoana izao dia iray isan'ireo lehibe indrindra raha fikambanam-pivavahana ao amin'ny firenena. Io Eglizy io no tompon'ny tambajotram-panapariahana brezilàna RecordTV, izay manana rantsana 150 manerana izao tontolo izao, ka ao Angôlà ny iray.
Tamin'ny Febroary sy Martsa 2013, natrehan'ny EURD ny fanafoanana ny asany rehetra tao Angôla taorian'ny nahafatesan'ireo olona folo sempotra sy voahitsakitsaka, nandritra ny fotoam-pivavahana izay natao tao anaty kianja iray feno hipoka tafahoatra.
Teresa Cruz e Silva, ramatoa iray mpikaroka, no nanazava fa tao Mozambika, nifanandrify taminà vanimpotoana nisian'ny krizy nateraky ny ady an-trano ny fahatongavan'ny EURD tamin'ny 1992, izay nanampy betsaka tamin'ny fidirana faobe ho ao amin'io eglizy io.
Lire aussi : Boky iray vaovao mitanisa ny fisandratana malaky be azon'ilay eveka breziliàna Edir Macedo, tamin'ny namoronany fanjakàna iray miaraka aminà fiangonana sy banky ary antoko politika izay izy ihany no lohany amin'izao fotoana izao [fr]
Tsy miafina amin'ny rehetra ihany koa fa mitombo ny disadisa any amin'ireo tany hafa mampiasa sy miteny portiogey, toy izay nisy tao Mozambika sy tao São Tomé-sy-Príncipe.
2 andro izayFahasalamàna